Al-shabaab oo habeenkii xalay weeraro qorsheysan ku qaaday deegaano ka tirsan Sh/hoose – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Al-shabaab oo habeenkii xalay weeraro qorsheysan ku qaaday deegaano ka tirsan Sh/hoose
Waxaa faah faahin dheeraad ah laga helayaa weeraro culus oo ay Al-shabaab habeenkii xalay ku qaaday xarumaha ay ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ku leeyihiin deegaano ka tirsan gobolka Sh/hoose.
Weerarkaasi oo sida lasheegay ahaa mid ay Al-shabaab muddo dheer kasoo shaqeynaysay ayaa ka dhacay deegaanadda No. 50 iyo Muuri, waxaana weerarkaasi uu socday muddo saacado ah.
Inta la xaqiijiyay waxaa weerarkaasi ku geeriyootay ilaa 6 qof oo askar u badan, iyadoona sidoo kale weerarkaasi lagu gubay dhowr guri oo ku yaala degaanka No. 50 ee gobolka Sh/hoose.
Xarakada Al-shabaab ayaa sheegtay in weeraradaasi ay la wareegeen gacan ku haynta degaanadda No. 50 iyo Muuri, islamarkaana ay qabsadeen gaari Kaarib ah, waxayna intaas ku dareen inay dileen askar ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya.
Dhinaca kale, dadka degaanka No. 50 oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in qoriga baasuukaha ah ay Al-shabaab kusoo rideen deegaankaasi uu baab’iyay dhowr guri oo ku bas-beelay degaankaasi.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa saakay aad u kacsan xaaladda deegaanadda No. 50 iyo Muuri oo labadaba ka tirsan gobolka Sh/hoose, mana jirto hadal kasoo baxay saraakiisha ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM oo ay kaga hadlayaan weerarkii lagu kala qaaday labadaasi deegaan.